ပြည်ပကုမ္ပဏီများကို အသစ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုထားသော နတ်မောက်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာလုပ်သား ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးပြုရန် အဆိုပါ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်များကို တင်ဒါ အောင်မြင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိထားကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်ဇော်က ပြောကြားသည်။
ဒေသတွင်း လုပ်ကွက်များသည် စီးပွားဖြစ် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့် အညီ ပြည်တွင်းရှိ လုပ်သားများကို ကျွမ်းကျင်သင်တန်းများ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးနေကြောင်း၊ ၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ်တွင် BOC တူးဖော်ခဲ့သည့် နတ်မောက်မြို့ အနောက်ဘက် ဝက်ချုပ်ကျေးရွာရှိ တွင်းအမှတ် (၄) မှ ဓာတ်ငွေ့ (၀ ဒသမ ၂) ကုဗပေသန်း ရရှိသော နေရာတွင် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးတွင်းများ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
မကွေးတိုင်း နတ်မောက်မြို့နယ်ရှိ ကုန်းတွင်း လုပ်ကွက်များဖြစ်သော ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းနှင့် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများကို ပြည်ပကုမ္ပဏီများမှ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းတွင် ယမန်နှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လက်ပံတောင်းတောင် ပဋိပက္ခကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ကြောင်း နတ်မောက် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအောင်ကျော်စိုးက ဆိုသည်။
news_shnmatasao_tzo မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ဒေသများဖြစ်သော ပုဂံ၊ သရေခေတ္တရာ၊ မြောက်ဦး ရှေးဟောင်း နယ်မြေများအတွင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်သူများကို အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ရှေးဟောင်း သုတေသန၊ အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနက နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရှေးဟောင်းကန့် သတ်ဇုန်များအတွင်း အဆောက်အအုံ ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုး ခတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ အရ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနက ရှေးဟောင်း အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံများရှိရာ နေရာ (Monument Zone) နှင့် ရှေးဟောင်းနယ်မြေ (Ancient Site Zone) များကို သတ်မှတ်ထားပြီး ဇုန်နှစ်ခုလုံးနှင့် ပေ ၉၀ အကွာတွင် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် မရှိကြောင်း မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင် ဦးကျော်ထွန်းအောင်က ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (Global Heritage Fund) က အာရှတိုက်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားမည့် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် နေရာအဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားသော မြောက်ဦးမြို့ရှိ ရှစ်သောင်း ပုထိုးတော်ကြီး အနီးတွင် သြဂုတ်လဆန်းက နေအိမ်အလုံး ၂၀ခန့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းကို ဒေသခံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာက ပူးပေါင်း ကြိုးပမ်း တားမြစ်နိုင်ခဲ့၍ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း မြောက်ဦး နာရေးကူညီမှုအသင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပုဂံ၊ သရေခေတ္တရာ၊ မြောက်ဦး ကန့်သတ်ဇုန်များအတွင်း ခြံများတိုးချဲ့ ကာရံခြင်း၊ အဆောက်အအုံများ တိုးချဲ့ခြင်း၊ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အုတ်ဖုတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ပျက်စီးလျက် ရှိကြောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ယင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထပ်မံပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
ယင်းဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သော နည်းဥပဒေများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသ ၄၆ ခုကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လျက် ရှိကြောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့၏ ရန်ပုံငွေသစ် စီမံချက်ကြောင့် အမျိုးသား ခုခံအား ကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး စီမံကိန်းက လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း HIV/AIDS ဝေဒနာရှင် ၇၆,၆၆၈ ဦးထိ ART ဆေး တိုးမြှင့် ထောက်ပံ့သွားရန် ရှိကြောင်း အဆိုပါ စီမံကိန်းမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းညွန့်ဦးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တိုးမြှင့် ထောက်ပံ့ပေးမည့် အစီအစဉ်ကြောင့် ART ဆေး လိုအပ်သူများ၏ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဆေးရရှိနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ထက် HIV/AIDS လူနာသစ် တစ်သောင်းကျော်ခန့် ART ဆေးတိုးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
အလားတူ ယခင်က တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် နှစ်ကြိမ် သောက်သုံးရသော d4T Based ဆေးဝါး များကို ထောက်ပံ့ရာမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နေ့စဉ် တစ်ကြိမ်သာ သောက်သုံးရသည့် TDF Based ဆေးဝါးများ ပိုသုံးစွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းညွန့်ဦးက ပြောဆိုသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မိတ်ဖက် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ထောက်ပံ့ပေးနေသော HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၅၃,၇၀၉ ဦးနှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၆၀,၆၁၈ ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ART ဆေးသောက်သုံးရန် နှစ်စဉ် လိုအပ်သူ ဦးရေသည် ၁၂၅,၀၀၀ ဝန်းကျင် ရှိကြောင်း အမျိုးသား ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး စီမံကိန်းအရ သိရသည်။
ယုဇနပလာဇာအနီး အုပ်စုလိုက် ရိုက်နှက်သူများကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ရန်ကုန်မြို့ ယုဇနပလာဇာ အနီးတွင်ရှိသော MM (2) ဆေးဆိုင် ဝန်ထမ်းများကို ရိုက်နှက်ကာ ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားခံရသူများကို ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး လွတ်မြောက်နေသူ နှစ်ဦးကို စုံစမ်းလျက် ရှိကြောင်း တာမွေမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ်ရဲမျိုးဟိန်းက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိထားသူများမှာ တာမွေမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သည့် ထက်မြက်နိုး (ဘ) ဦးမောင်မောင်ဆွေ၊ ကျော်ဒင်ဖြိုး (ဘ) ဦးကျော်ဦး၊ ဇော်မင်းထွေး (ဘ) ဦးစိုးနိုင်တို့ ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့ကို အခင်းဖြစ်သည့် ညတွင်းချင်းပင် ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ရဲအုပ် ရဲမျိုးဟိန်းက ပြောကြားသည်။
၎င်းတို့ သုံးဦးနှင့် အခြားနှစ်ဦးတို့ အရက်သောက်ပြီး ပြန်လာစဉ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီခွဲခန့်က MM (2) ဆေးဆိုင်ဝန်ထမ်း ဦးအောင်မင်းသက် တွန်းလာသည့် စက်ဘီးသည် လမ်းလျှောက် ပြန်လာသည့် ၎င်းတို့ငါးဦးမှ တစ်ဦးကို ပွတ်မိရာမှ စကားများကာ အဆိုပါ ငါးဦးက ထိုးကြိတ်ပြီး ထွက်သွားကြောင်း၊ ဦးအောင်မင်းသက်၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ ဦးဝေမင်းဟန်က ဆေးဆိုင်သို့ ခေါ်ကာ ဆေးထည့်ပေးနေစဉ် သုံးဦး ဆိုင်သို့ ပြန်လာကာ ရိုက်နှက်ဖျက်ဆီးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ တာဝန်ရှိသူ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
ရိုက်နှက် ခံရခြင်းကြောင့် ဦးဝေမင်းဟန်သည် ညာလက်ဖျံပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာနှင့် လက်ကောက်ဝတ် နာကျင်ဒဏ်ရာရရှိကာ ဦးအောင်မင်းသက်မှာ ညာလက်ဖျံ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ၊ နဖူးပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာရရှိကာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အပြင်လူနာအဖြစ် ကုသနေကာ ဆေးဆိုင်မှာမူ ကျပ်ရှစ်သိန်းဖိုးခန့် ပျက်စီးသွားကြောင်း စခန်းမှူး ရဲအုပ်ရဲမျိုးဟိန်းက ဆိုသည်။
“တာမွေမြို့နယ်ထဲကပဲ။ သုံးယောက်က သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ အရက်ဆိုင်မှာပဲ သိကြတယ် ပြောတယ်။ နာမည်တော့ မသိဘူး။ လူမြင်ရင်တော့ မှတ်မိတယ်လို့ တရားခံတွေက အစစ်ခံပါတယ်” ဟု ရဲအုပ် ရဲမျိုးဟိန်းက ပြောကြားသည်။
ရိုက်နှက်သူများ ယူဆောင်လာသော ဝါးတုတ်များမှာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဆိုင်များမှ ဖြုတ်ယူလာခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာ၏အနီးတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တိုင်ကြားခံရသူများကို ပုဒ်မ ၃၂၅ (နာကျင်စေမှု)၊ ပုဒ်မ ၄၄၀ (အကျိုးဖျက်ဆီးမှု)၊ ပုဒ်မ ၁၁၄ (ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု) တို့ဖြင့် အရေးယူထားကြောင်း တာမွေမြို့နယ် ရဲစခန်းထံမှ သိရသည်။
မုံရွာ၊ နိုဝင်ဘာ ၃
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသည့် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း နယ်မြေအတွင်းရှိ လယ်တီသိမ်တော်နှင့် စေတီကို မပျက်စီးစေရန်အတွက် လက်ပံတောင်းတောင်အနီး အင်ကြင်းတောင်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်၍ ထိုင်သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်၍ လယ်တီသိမ်နှင့် စေတီကို ဖူးမြော်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုလျက် ရှိကြောင်း ဆည်တည်းရွာ ဒေသခံ များက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိ သပိတ်စခန်းဖွင့်၍ တောင်းဆိုနေသော အင်ကြင်းတောင်မှာ ဆည်တည်း ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပြီး လက်ပံတောင်းတောင်နှင့် တစ်မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိကာ၊ သံဃာတော် ခြောက်ပါးနှင့် လက်ပံတောင်း ဒေသခံ ၁၅၀ ခန့် ထိုင်သပိတ်စခန်းတွင် ရှိကြောင်း ဆည်တည်းရွာတွင် နေထိုင်၍ လက်ပံတောင်းအရေး တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားနေသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
လယ်တီသိမ်ကို သွားရောက် ကြည့်ရှုရခြင်းမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီဝန်းကျင်တွင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှ ခွဲခဲ့သည့် မိုင်းမှာ အင်အားပြင်းသည့်အတွက် သိမ်၏ ကြံ့ခိုင်မှု အခြေအနေကို တွေ့မြင်လို၍ သွားရောက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လက်ပံတောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့မှ လက်ပံတောင်းဒေသရှိ လယ်တီသိမ်တော်သို့ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများနှင့် ဖြေလျှော့ရေး အဖွဲ့တို့၏ ညှိနှိုင်း သဘောတူညီချက် ငါးချက်ကို သဘောတူညီမှု ရခဲ့ပြီး၊ လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနေစဉ်နှင့် ဆရာတော်ဘုရားကြီးများ သံဃာတော်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ခံယူနေစဉ် အတွင်းမှာ သိမ်တော်နှင့် စေတီကို မည်သည့် အကြောင်းနှင့်မျှ မပျက်စီး မရွှေ့ပြောင်းဘဲ ပကတိအတိုင်း တည်ရှိစေရမည်ဟူသည့် အချက်နှင့် ဘုရားဖူး ပြည်သူများ ဖူးမြော် ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ငါးယောက်ထက်မပို သုံးရက်အတွင်း ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံရမည်ဟူသည့် သဘောတူညီချက်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဖလား ဖွင့်ပွဲတွင် မြန်မာရိုးရာခြင်းလုံး သရုပ်ပြရန် ဖိတ်ကြားခံရဟုဆို
ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ၏ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းလုံးကို သရုပ်ပြ ကစားပေးရန် ဖိတ်ခေါ်မည်ဟု ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပရေး တာဝန်ယူထားသည့် Panorama အဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရိုးရာခြင်းလုံး အဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးရဲအောင်က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရိုးရာခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို ဘရာဇီးနိုင်ငံက တရားဝင် ဖိတ်ကြားထားခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ဖိတ်ကြားခဲ့ပါက လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ SEA Games ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လက်ရွေးစင် ကစားသမားများနှင့် သွားရောက် ဖျော်ဖြေရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းလုံး အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်သို့ ထိုးဖောက်ရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ယင်းသို့ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပြသနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းပြိုင်ပွဲ၏ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းလုံးကို ထည့်သွင်း ပြသရန် ဘရာဇီးရုပ်သံ တစ်ခုဖြစ်သည့် Global Net-work အဖွဲ့သည် ဇူလိုင်လအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် ခဲ့ကြောင်း၊ ခြင်းလုံး ထုတ်လုပ်ပုံမှစ၍ မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံးကစားပုံ အကြောင်းကို မန္တလေးမြို့တွင် တစ်ပတ်ခန့် လာရောက် ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဝါဆို ခြင်းလုံးပွဲတော် ကျင်းပပုံကိုလည်း ရိုက်ကူးသွားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခြင်းလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ နည်းပြတစ်ဦးက ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။
အကြိမ် (၂၀) မြောက် ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကို ဘရာဇီးနိုင်ငံက ဒုတိယအကြိမ် မြောက်အိမ်ရှင် နိုင်ငံအဖြစ် ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ဂျာမနီ၊ အိုင်ယာလန်၊ ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံတို့မှ ရိုးရာအားကစားနည်းများကို ထည့်သွင်း ဖျော်ဖြေမည် ဖြစ်သည်။
မန္တလေးတွင် စာပေစကားဝိုင်း ပြန်လည် ပြုလုပ်မည်
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၃
မန္တလေးမြို့တော်အခြေစိုက် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ကာတွန်းဆရာများ စုစည်းကာ အလွှာစုံ ပါဝင်သော မန္တလေး စာပေစကားဝိုင်းကို နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်၍ တစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ စကားဝိုင်း ဦးဆောင် စီစဉ်သူများထံမှ သိရှိရသည်။
မြန်မာစာပေလောကတွင် ရသစာပေ ဖြစ်ထွန်းမှုမှာ အားနည်းနေပြီး မန္တလေးစာပေ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ စကားဝိုင်း စီစဉ်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ရာပြည့်မန္တလေး စာအုပ်တိုက် လုပ်ငန်းရှင် ဦးပုညဆွေက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
မန္တလေး စာပေအသိုက်အဝန်းတွင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်နှင့် မျိုးဆက်ဟောင်းများ အကြားတွင် ပေါင်းကူးပေးနိုင်ရန်အတွက် မန္တလေး စာပေစကားဝိုင်းကို စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဦးဆောင်သူများတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ စာရေးဆရာ ညိုထွန်းလူက ပြောကြားသည်။
ယင်းအစီအစဉ်သည် ဂုဏ်ကျက်သရေရှိသည့် ကိစ္စဖြစ်သည့် အတွက် ထောက်ခံကြိုဆိုပါကြောင်း ကဗျာဆရာ မောင်နွေထက်က ပြောကြားသည်။
ပထမဆုံး ပြန်လည် ပြုလုပ်မည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ စာပေစကားဝိုင်းတွင် စာရေးဆရာ သိုက်ထွန်းသက်၏ ဈေးချိုသူ ဝတ္ထုတိုနှင့် ဆင်တူကြောင်းကွဲ ဒီဇိုင်းများ ဝတ္ထုတို နှစ်ပုဒ်ကို စတင် ဝေဖန်သုံးသပ် စကားဝိုင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး ဝတ္ထုတို၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလှည့်ကျ ဝေဖန်သုံးသပ် စကားဝိုင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် အခြေစိုက် စာရေးဆရာများ အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ သိရှိရသည်။
မန္တလေးမြို့တော်တွင် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ကာတွန်းဆရာများ စသည်ဖြင့် အလွှာစုံ ပါဝင်သော မန္တလေးစာပေ စကားဝိုင်း ဖြစ်မြောက်ရေး အစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီက မန္တလေးမြို့တော် ၈၀ လမ်းx ၈၁ လမ်းကြား၊ ၃၄ လမ်း ရာပြည့်မန္တလေး စာအုပ်တိုက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့ စာပေအသိုက်အဝန်းတွင် စာပေစကားဝိုင်းများကို အစုအဖွဲ့အလိုက် ကျင်းပနေသော်လည်း မန္တလေး စာပေလောကနှင့် မြန်မာစာပေလောကကို ထင်ဟပ်သော မန္တလေး စာပေစကားဝိုင်း မကျင်းပဖြစ်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံ စာရေးဆရာတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မန္တလေးမြို့တော်တွင် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ဓမ္မဗိမာန် စာပေဝိုင်း၊ ဟံသာဝတီစနေ စာပေ စကားဝိုင်းတို့မှာ မြန်မာစာပေလောကတွင် ထင်ရှားခဲ့သည်။
အရပ်သားတစ်ဦးကို အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်နှစ်ဦး သေနတ်ဒင်ဖြင့် ဝင်ရိုက်
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၃
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ မြေနီကုန်းရပ်ကွက် မဟာမြိုင် (၉) လမ်းထိပ်တွင် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်နှစ်ဦးက ယင်းရပ်ကွက်နေ ဦးသင်းကိုကိုကို နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီအချိန်တွင် သေနတ်ဒင်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း ဦးသင်းကိုကို၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဇာခြည်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လက်နက်ကိုင် နှစ်ဦးသည် မြေနီကုန်းရပ်ကွက် မဟာမြိုင် (၉) လမ်းထိပ်တွင် ဦးသင်းကိုကိုနှင့် ဦးကျော်ကိုကိုတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦး ထိုင်နေစဉ် သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး သေနတ်ဒင်ဖြင့် ထုသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“သင်းကိုကိုက လမ်းထိပ်မှာ ထွက်ထိုင်နေတာကို ဆိုင်ကယ်စီးပြီး သေနတ်ကိုင် ထားတဲ့သူတွေ ရောက်လာပြီး သူကို့ထိုးတယ် အဲဒါကို သူ့ညီကျော်ကိုကို လိုက်သွားတာ သေနတ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ခေါင်းကို သေနတ်ဒင်နဲ့ ထုသွားတယ်” ဟု ၎င်းတို့၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးသာစိန်က ဆိုသည်။
သေနတ်ဒင်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခံရသည့် ဦးသင်းကိုကိုကို မော်လမြိုင်မြို့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်သို့ ပို့ဆောင်ထားရကြောင်း ဦးသာစိန်က ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လက်နက်ကိုင်နှစ်ဦး ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် ကျည်ဆန် အခွန်နှစ်ခုကို မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ရရှိထားပြီး ယင်းကျည်ဆန်များကို စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ လက်နက်ကိုင်များသည် မည်သူဖြစ်သည်ကို မသိရှိရသေးကြောင်း မော်လမြိုင် ဒိုင်းဝန်ကွင်း ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးအောင်ကျော်ထွေးက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ လက်နက်ကိုင် နှစ်ဦးတွင် တစ်ဦးမှာ ဆံပင်အရှည်နှင့် ဖြစ်ပြီး ညအမှောင်တွင် ဖြစ်ခြင်းနှင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကာ ၎င်းတို့၏ မျက်နှာကို သည်းသည်းကွဲကွဲ မမြင်ရကြောင်း ဦးကျော်ကိုကိုက ဆိုသည်။
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးသင်းကိုကိုသည် မည်သည့် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွင်မှ ပါဝင်ဖူးခြင်း မရှိသည့် မြေနီကုန်း ရပ်ကွက်နေ သာမန်အရပ်သား ကျပန်း လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးသာ ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ၎င်း၏ မိသားစုဝင်များက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃
တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၅ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ညီနောင် တိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရေးရှင်း (NBF) သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ အခန်းအားလုံးကို ပြင်ဆင်ထားပြီး နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယပတ်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မတီသို့ ပေးပို့ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း NBF အဖွဲ့ဝင် ချင်းအမျိုးသားပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးငယ်တီးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်များ အပြီးသတ်ရေးအတွက် နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့များ၌ နေပြည်တော် ရတနာသိင်္ဃ ဟိုတယ်တွင် NBF အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ် ၅၁ ဦး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ မညီတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေ အခန်းတိုင်းမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ ဘယ်နှချက်ဆိုတာ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးဘူး” ဟု ၎င်းကရှင်းပြသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ သုံးကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်ချက်များ များလွန်းနေသောကြောင့် ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ညီနောင် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်း (NBF) ကို တိုင်းရင်းသားပါတီ ၁၅ ပါတီဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီ၊ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ကယန်း အမျိုးသားပါတီ၊ အင်းအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ဖလုံ -စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ၊ အရှိုချင်းအမျိုးသား ပါတီ၊ တအောင်း (ပလောင်) အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ပအို့ဝ် အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ဝဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ဝအမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးပါတီတို့ ပါဝင်သည်။
ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် အကျဉ်းချခံရသူများ ပြန်လွှတ်ပေးရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြ
စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် ခွင့်ပြုချက် မယူသည့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် အကျဉ်းချခံရသူများ ပြန်လွှတ်ပေးရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ လက်ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ဆေးရေး ကော်မတီက တင်ပြထားကြောင်း အဆိုပါ ကော်မတီဝင် ဦးရဲအောင်က ပြောကြားသည်။
ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် အကျဉ်းချခြင်း ခံထားရသော အကျဉ်း
သား ၂၀ ကျော် ရှိပြီး ၎င်းတို့ကို လက်ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အကျဉ်းသားများကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအဖြစ် စိစစ်နိုင်ရေး အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော လက်ကျန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကော်မတီထံမှ သိရသည်။
ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် အကျဉ်းကျ ခံရသူများအပြင် ယင်းပုဒ်မဖြင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ ၂၃၂ ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့ အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်မြောက်နိုင်ရေးအတွက် လက်ကျန် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကော်မတီဝင် ဦးဘိုကြည်က ပြောကြားသည်။
အကျဉ်းထောင်များအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးကို ယခု နှစ်ကုန်တွင် အကြွင်းမဲ့ လွှတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတက ပြောကြားထားသော်လည်း အစိုးရသစ် လက်ထက် တွင် နိုင်ငံရေးတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများကို ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိနေသောကြောင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း နိုင်ငံရေး လေ့လာသူများမှ သုံးသပ်ပြောဆိုထားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို နိုင်ငံတော်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ၁၂ ကြိမ်လွှတ် ပေးခဲ့ကာ အကျဉ်းသား ၁၂၀၀ ကျော် လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး အကျဉ်းထောင်များအတွင်း ၂၀၀ ကျော် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
"ဝါရင့်ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံး Gmail အကောင့် ရှိနေကြပါပြီ" လို့ Google ဥက္ကဋ္ဌက ပြောပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာလုပ်တဲ့ ဟောပြောပွဲတခုအတွင်း အဲဒီလို ပြောလိုက်တာပါ တဲ့။
အိုင်တီခေတ်ရောက်ပြီ ဆိုတော့လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှာ Gmail အကောင့် တခုစီတော့ ရှိနေကြလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ပုံမှန် သုံးမသုံးဆိုတာကတော့ တကဏ္ဍ ဆိုပါစို့။
အခါအားလျော်စွာသုံးတဲ့ အဘတွေကတော့ ဦးအောင်ကြည်၊ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးရဲထွဋ်တို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဝါရင့်ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံး Gmail သုံးနေကြပြီလို့ Google ဥက္ကဋ္ဌက အဲဒီလို ပြောလိုက်ခြင်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် သိခဲ့ရတာတွေကို ကိုးကားပြီး ပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ Google ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ မြန်မာပြည်လေ့လာရေးခရီးအတွင်း ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။
သူ မြန်မာပြည် လာတုန်းကတော့ ...
အင်တာနက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေက နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်နိုင်တော့ဘူး၊ အင်တာနက် အဆင်ပြေသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်ထွန်းလာမှာပဲ လို့ ပြောပါတယ်။
အာရှရဲ့ စီးပွားရေး စားကျက်သစ်တခု ဖြစ်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုဘိုင်း နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ မြန်မြန် တိုးတက်ဖို့လိုနေတယ်၊ မြန်မာပြည် ဈေးကွက်ထဲ ၀င်ပြီး Andriod အသုံးပြုထားတဲ့ Google စမတ်ဖုန်းတွေကနေ အမြတ်ငွေ ကြီးကြီးမားမား ရရှိနိုင်တယ်လို့ ထောက်ပြမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဆင်မ်ကတ်တွေ ဈေးချပြီး မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုမှု အလျင်အမြန် တိုးတက်လာမယ့် မြန်မာပြည် ဖုန်းဈေးကွက်ကလည်း Google အတွက် မက်မောစရာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကိုနေရွှေသွေးအောင်ကို ဦးသန်းရွှေက နေပြည်တော် ပြန်ခေါ်ထား
ဧရာဝတီ| November 4, 2013
ကိုနေရွှေသွေးအောင် (သရုပ်ဖော် – စိုင်းစိုးကြည် / ဧရာဝတီ)
သူရိယအလင်း ဂျာနယ်တိုက်ကို ဝင်ရောက်သိမ်းဆည်းမှုမှာ ပါတယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်ပြီးနောက် ကိုနေရွှေသွေးအောင် ခေါ် ဖိုးလပြည့်ကို အဖိုးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေက ရန်ကုန်ကနေ နေပြည်တော်ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူထားလိုက်ပြီလို့ နေပြည်တော် သတင်းရပ်ကွက်ကနေ သိရပါတယ်။
ဒီလို ကိုနေရွှေသွေးအောင်ကို နေပြည်တော် ပြန်ခေါ်ထားလိုက်ရတာကတော့ သူရိယအလင်း ဂျာနယ်ရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် (CEO) ဦးမိုးဟိန်းဟာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဟောင်းတဦး ဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကလူတွေနဲ့ ပတ်သက်ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်မှာ စိုးတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းသုံးသပ်မှုများလည်း ရှိနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ညက ရန်ကုန်မြို့ရှိ သူရိယအလင်း ဂျာနယ်ရုံးခန်းကို လူတစုက ဝင်ရောက်ပြီး ကွန်ပြူတာနဲ့ ရုံးသုံးပစ္စည်းတချို့ ဝင်ရောက် သိမ်းဆည်းရာမှာ ကိုနေရွှေသွေးအောင် ပါဝင် ပတ်သက်ကြောင်း၊ ဂျာနယ်တိုက်ထဲကို ကိုနေရွှေသွေးအောင် ကိုယ်တိုင် မဝင်ရောက်ပေမယ့် ပစ္စည်းတွေ လာရောက် သိမ်းဆည်းသူတွေနဲ့အတူ ပါလာကြောင်း ဦးမိုးဟိန်းက ညစောင့်ဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ကိုးကားပြီး အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားပါတယ်။
အဲဒီ သူရိယအလင်း ဂျာနယ်တိုက် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုနေရွှေသွေးအောင်ဘက်က ပြန်လည် ရှင်းလင်းတာမျိုးမရှိသလို ဦးမိုးဟိန်းဘက်ကလည်း တရားစွဲဆို အမှုဖွင့်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
သူရိယအလင်း ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ ဦးယုတင်ကိုယ်တိုင်က စက်ပစ္စည်းတွေ သိမ်းယူသွားတာလို့ သိရပြီး နောက်တရက်မှာပဲ သူရိယအလင်း ဂျာနယ် ထုတ်ဝေမှုကို ရပ်ဆိုင်းကြောင်း အစိုးရ သတင်းစာတွေထဲမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သူရိယအလင်း ဂျာနယ် ထုတ်ဝေမှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက် သူရိယ နေဝန်း အမည်နဲ့ ဦးမိုးဟိန်းက ဆက်လက် ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ ဦးမိုးဟိန်းနဲ့ ဦးမိုးသီးဇွန်၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမြအေး စသူတွေနဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တင်ခဲ့ပြီး အဲဒီဂျာနယ်ကနေ တဆင့် ကိုနေရွှေသွေးအောင်ကို ရည်ညွှန်းပြီး “ဒီလုပ်ရပ်ဟာ နာဇီ စိတ်ဓာတ်၊ ဖက်ဆစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် လုပ်သွားတဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
မယ်စကြဝဠာ ပြိုင်ပွဲဝင် အလှမယ် မိုးစက်ဝိုင်ကို တက္ကသိုလ် ချန်ပီယံလိဂ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား မှာ ဆုဖလား ကိုင်ဆောင်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရာကနေ လူအများ ဝေဖန်စရာမှုကို ခံရပြီးနောက် ကိုနေရွှေသွေးအောင်က ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ Universities Champions League ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့် ရှင်းလင်းချက် ထုတ်ခဲ့တာပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လတုန်းက ယာဉ်ထိန်းရဲတဦးကို ကိုနေရွှေသွေးအောင်က ထိုးကြိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အဆိုပါ ရှင်းလင်းချက်မှာ တခါတည်း ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကတော့ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ကိုနေရွှေသွေးအောင် မောင်းနှင်လာတဲ့ကားကို တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနဲ့ အင်းလျားလမ်း မီးပွိုင့်မှာရှိတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်သား စံသိန်းထွေးက လမ်းရှင်းပေးရာမှာ မီးနီနေတာကို မီးစိမ်းပေးခဲ့ပေမယ့် ပွိုင့်ဖြတ်စဉ်မှာ မီးဝါသွားတဲ့အတွက် ကားပြန်လှည့်လာပြီး တာဝန်ကျရဲကို လက်သီးနဲ့ ထိုးခဲ့ကြောင်း၊ မကျေနပ်သေးဘဲ ညနေပိုင်းမှာ အိမ်ခေါ်ပြီး အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်သား စံသိန်းထွေးကတော့ သူအနိုင်ကျင့်ခံရတာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း အဲဒီကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်စဉ် ကာလဝန်းကျင်တုန်းက ဧရာဝတီကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ်ကတဆင့် ကိုနေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်မှာ “မိမိအနေဖြင့် ကောလာဟလများ ပြန့်နေသလို စင်ကာပူသို့ နေ့ချင်းပြန်လည်း ကျောင်းမတက်ဖူးပါ။ ဆယ်တန်းဖြေတုန်းကလည်း The whole burma မရပါ (မိမိကျောင်းမှ ထိုနှစ်က အဆင့် ၆ သာ ချိတ်ပါသည်)၊ မည်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးမျှလည်း မသုံးဘူးပါ (သင်္ကြန်နှင့် မွေးနေ့များတွင်ပင် မိမိ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း မပြုပါ)၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကိုလည်း ခိုးမပြေးဖူးပါ၊ မိုးယုစံနှင့်လည်း လက်မထပ်ရပါ၊ စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် မိမိကို ဘဲကင်ဝယ်ပေးရသည် ဆိုမှာလည်း လုံးဝ မမှန်ပါ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ကိုလည်း မိမိ ဤဘဝတသက်လုံး ငွေစုလျှင်ပင် မဝယ်နိုင်ပါ” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အငှားယာဉ်ပေါ် ၌ဓါးရှည် (၁)ချောင်းတွေ့ရှိ၍ ယာဉ်မောင်းအားအရေးယူ
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၄
၃၁.၁၀.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၂၃၃၀အချိန်တွင်ဒဂုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်ဆယ်အိမ်မှူးများနှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ဒဂုံမြို့နယ်၊အမျိုးသားကဇာတ်ရုံရှေ့မြို့မကျောင်းလမ်းတွင်ယာဉ်စစ်ပိတ်ဆို့
ဆောင်ရွက်နေစဉ် မြောက်မှတောင်သို့ ယာဉ်မောင်း ဇော်ငြိမ်းအေး (ဘ)ဦးသန်းထွန်း၊ ဘောဂရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နေသူ
မောင်းနှင်လာသော၇ဃ/---- ကိုရိုလာ အဖြူရောင်အငှားယာဉ်အား
စစ်ဆေးရာ ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံယာဘက်ဘေး၌ ဓါးအိမ်ပါဓါးရှည် (၁)ချောင်းအားတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိသဖြင့် ယာဉ်မောင်းဇော်ငြိမ်းအေးအား ဒဂုံမြို့မရဲစခန်း(ပ)၂၃၄/၂၀၁၃၊ လက်နက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(င)ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
(၁) ဆရာရှင့် သမီးက ညဖတ်အိပ်ရင် အံသွားကြိတ်ပါတယ်။ အရမ်းရှက်သလို အနားကသူတွေကို အားနာရတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖြစ်တာပါ။ အခု ၃၅ နှစ် ရှိပြီး အိမ်ထောင် ရှိပါပြီ။ သမီးဘာလုပ်ရမလဲဆရာ။
(၂) Doctor, I would like to know about Grinding Teeth. What is cause by? And how can I do for not grinding teeth when sleeping deeply in night time. How can I protect not for not to grinding teeth?
ကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ရော သွားကျန်းမာရေပါ ဆိုင်တယ်။ အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်ဖိအားကို အရင်ဆုံး သတ္တုချတယ်။ သွားဆရာဝန်ကတော့ သွားတွေ တခုနဲ့တခု အနေမကျလို့ ဖြစ်တာလို့ ပြောမယ်။ ကလေးတွေလဲ ၁၅-၃ဝ% ဖြစ်တာဘဲ။ အကျင့်လိုပါနေတာလဲရှိတယ်။ ငယ်သွားရှိတုံးအကျင့်ရှိတာ သိပ်စိုးရိမ်စရာ မလိုပါ။
Reflex တုံ့ပြန်မှု မဟုတ်ဘူး Habit အကျင့်လို့ ထောက်ပြတာ ရှိတယ်။ အိပ်ရေး မမှန်တာကြောင့်လဲ ဖြစ်ရတယ်။ အရက်၊ စိတ်မကျဆေးတွေကနေ ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။ နာတာရှည် ဖြစ်နေသူတွေမှာ သွားကိုလာ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ ကလေးတွေမှာ အအေးမိတာ၊ ပိုးဝင်တာတွေကြောင့် ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
• Taste-based biofeedback method ကုနည်းတမျိုးလဲရှိတယ်။ ပိတ်ထားတဲ့အိတ်လေးထဲမှာ မကြိုက်မဲ့အရသာ Hot sauce, Vinegar, Denatonium benzoate ထည့်ပေးထားလို့ သွားကြိတ်ရင် အိတ်ကပေါက်ထွက်ပြီး လူက သတိ ရှိလာစေဘို့ ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်။
• စားစရာ မဟုတ်တာတွေ ဥပမာ ခဲတံကိုက်တဲ့အကျင့် ဖျောက်ပါ။ နေရင်း-ထိုင်ရင် သွားကြိတ်တဲ့ အကျင့် ပြောင်းပါ။
• Uoga deep-breathing exercises ယောဂ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
• ခေါင်းအုံးကို ခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းနေရာအောက်ကမြှင့်ထားပြီး အိပ်ပါ။
Miss Universe 2013 National Costume Show မှနိုင်ငံတကာအလှမယ်များ
Miss Universe 2013 ပြိုင်ပွဲ National Costume Show မှမိုးစက်ဝိုင်
မန္တလေး လေဆိပ်တွင် အသေးစား မီးလောင်မှုဖြစ်
ဧရာဝတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၃
မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ပထမထပ်ရှိ ESPACE CAFÉ & BAR ဆိုင်တွင် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၀၀း ၁၅ နာရီ အချိန် ရေခဲသေတ္တာ Safe Guard အပူလွန်ကဲရာမှ ၀ါယာရှော့ဖြစ်၍ မီး လောင်ကျွမ်းမှုတရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မနက် ၀၂း၀၀ နာရီ မီးငြိမ်း သတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးမှာ ကျပ် သိန်း ၃၅၀ ခန့် ဖြစ်ကြောင်း တံတားဦးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရှိရသည်။
ဆရာ့စာထဲမှာ ဆံပင်ကြမ်းတာကို ဘယ်လိုကုသရမယ်ဆိုတာ မပါလို့ပါဆရာ။ ကျွန်တော့်ဆံပင်က ခြောက်သွေ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ အလှကုန်စာရေးတွေကတော့ တံဆိပ်တွေ အမျိုးမျိုးပြောင်းပေးနေပေမယ့် ထူးခြားမှု မရှိလှလို့ပါဆရာ။
၇။ Dying ဆေးဆိုတာနဲ့ Highlighting အရောင်ရင့်သန်စေတာ မလုပ်ပါနဲ့။
၁ဝ။ ကြက်ဥသုံးကြည့်ပါ။ တနာရီထားပါ။ နောက် ပြောင်စင်အောင်ဆေးလိုက်ပါ။ ညမအိပ်ခင် လိမ်းထားနိုင်တယ်။ မနက်မှဆေးပါ။
ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ရာ မလိုက်သောကြောင့် အမျိုးသမီးကိုရိုက်နှက်
ပဲခူး၊ နိုဝင်ဘာ ၃။
အောက်တိုဘာ ၂ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း
ဒေါ်အေးရီသည်နေအိမ်၌ ရှိနေစဉ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်
ရဲများရောက်လာပြီး ရိုက်နှက်ကြောင်း ဒေါ်အေးရီက
People Power သို့ ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အေးရီမှာ အကြွေးသိန်း ၂၀ပေးစရာရှိသောကြောင့်
တရားရုံးတွင် တရားမမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရ သူဖြစ်ပြီး တရားရုံးသို့လာရောက်ရန် တရားရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူုးနှင့် ရဲများသွားရောက် ခေါ်ယူ
ခဲ့ကြောင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ရဲစခန်းထံမှ သိရသည်။
“သူတို့က အဖမ်းမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး တုတ်နဲ့ရန်မူတာ ရဲတွေကရိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊အခုလည်း အထက်ကို တိုင်ထားတယ်လို့ကြားတယ်။ ဥပဒေ အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်”ဟု စခန်းမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ခေါ်ယူရာတွင် ဒေါ်အေးရီသမီးနှစ်ယောက်မှ ရဲများအား ရန်မူခဲ့ပြီး မလိုက်နိုင်ကြောင်းပြောသောကြောင့် ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေက သွားခေါ်တာ ရိုက်နှက်တာမရှိပါဘူး။ အဲဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့သတင်းပါဟု ကျောက်တံခါးရဲစခန်းမှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လာရောက်ခေါ်ယူသူများနှင့်စကားများရာမှ ရဲကရိုက်နှက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အေးရီကပြောကြားသည်။
ရေးသားသူ - ကြည်ပြာ
ဘိုးသူတော် ဦးနု စကားပုံများ
မတော်တာကို မမြည်း မစားနှင့်၊ အဖော်မပါလျှင် ခရီးမသွားနှင့်၊
မတော်တာကို မြည်းစားက ဘေးရလို့ ရောဂါ ပွားတတ်သည်။
အဖော်မပါပဲ ခရီးသွားက အရေးမလှသမို့ သောကများတတ်သည်။
ခရီးကိုလည်း အပြင်း မသွားနှင့်၊ မီးကိုလည်း အကြွင်းမထားနှင့်၊
ခရီးကို အပြင်းသွားက မှားတတ်သည်။ မီးကို အကြွင်းထားက ပွားတတ်သည်။
သေရည်ကိုလည်း မသောက်နှင့်၊ ရေကြည်ကိုလည်း မနှောက်နှင့်၊
သောက်ရည်ကို သောက်က အပါယ်ဘုံသို့ ကျတတ်တသည်။
ရေကြည်ကို နှောက်က အနယ်အမှုန်တို့ ထတတ်သည်။
မြူသလို ပုံနှင့် ကလေးကို မစနှင့်၊ လူကို ယုံသဖြင့် အကြွေးကို မချနှင့်၊
မြူသလို ပုံနှင့် ကလေးကို စက ကလေး အမိုက်မို့ ဆဲတတ်သည်။
လူကို ယုံသဖြင့် အကြွေးကို ချက အရေး မစိုက်လို့ မွဲတတ်သည်။
အမျိုးယုတ်သူ အဆင်းလှလျှင် သတိထား၊ တန်ခိုးနုပ်သူ ထမင်းဝလျှင် မကျီစားနှင့်၊
အမျိုးယုတ်သူ အဆင်းလှက စာဂတန်တတ်သည်။
တန်ခိုးနုပ်သူ ထမင်းဝက မာနထန်တတ်သည်။
ထင်တိုင်းလည်း နှိပ်၍ မဆိုနှင့်၊ ဝင်တိုင်းလည်း သိပ်၍ မမျိုနှင့်၊
ထင်တိုင်း နှိပ်၍ ဆိုက ရန်စွယ် ပွားတတ်သည်။
ဝင်တိုင်း သိပ်၍ မျိုက အန္တရာယ်များတတ်သည်။
အယုတ်တရားကို အလိုမရှိနှင့်၊ မဟုတ် စကားကို မဆိုဘိနှင့်၊
အယုတ်တရားကို အလိုရှိက ဘဂဝါ၏ စကားကို ပယ်ရာကျချေ၏။
မဟုတ်စကားကို ဆိုမိက သမာဓိတရားကို ကွယ်ပ ရလေ၏။
ဂေါဏ မံသံကိုလည်း မစားနှင့်၊ ကောဓခြံရံကိုလည်း မပွားနှင့်၊
ဂေါဏမံသံကို စားက အမိသဖွယ်ဖြစ်ပေသည်။
ကောဓခြံရံကို ပွားက အထိကရ အပါယ်နစ်ချေမည်။
အမျိုးမြတ်မှ အရိုးကြံရာသည်။ တန်ခိုးလျှပ်မှ အဖိုးတန်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဆာယာကို တွယ်ရမည်။ ရုပ်လှတာကို ပယ်ရမည်။
ဗုဒ္ဓဆာယာကို တွယ်မှ အေးမြရာသည်။ ရုပ်လှတာကို ပယ်မှ ဘေးပကွာမည်။
အဟုတ်အမှန်ကိုလည်း သိမှ၊ အလုပ်အကြံလည်း ရှိမှ၊
အဟုတ်အမှန်ကို သိမှ သံသရာဘေးပ၍ အနေကျယ်ကြမည်။
အလုပ်အကြံ ရှိမှ ဆန်ရှာရေးလှ၍ အခြေတည်ကြမည်။
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားသမားများကို ဒုဝန်ကြီးသတိပေး
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃။
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကျင်းပရန် ရက်ပိုင်းသာလိုတော့ချိန်တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားများအနေဖြင့် အစားအ သောက်၊
ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် အနေအထိုင်များကို အစစအရာရာသတိကြီးစွာ
ထားရှိကြရန် လိုအပ်ကြောင်း အားကစား ၀န်ကြီးဌာန၊
ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးသောင်းထိုက်က ပြောကြားသည်။
“ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ မလိုအပ်ဘဲဒဏ်ရာရတာတို့ ဖျားနာတာ တွေဖြစ်နေရင်
အကုန်လုံးအတွက် နစ်နာမှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမြဲတမ်းပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမား တွေအနေနဲ့ သတိ
ကြီးစွာထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
(၂၇)ကြိမ်မြောက်ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အားကစား နည်း ၃၃မျိုးဖြင့်
နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ငွေဆောင်တို့တွင် ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“ကစားသမားတွေ လက်ရှိအချိန်မှာမထင်မှတ်ဘဲ ဒဏ်ရာ
ရခဲ့မယ်ဆိုရင် တခြားကစားသမားတစ်ဦးနဲ့ အစားထိုးဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်နိုင်သလို တာဝန်ရှိသူတွေအတွက်လည်း စာရင်းရှုပ်စရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာကစားသမားများမှာ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ ငွေဆောင်တို့တွင် လေ့ကျင့်မှု များပြုလုပ်နေကြောင်း မိမိတို့မျှော်မှန်း ထားသည့် ရွှေတံဆိပ် ၁၀၀ကျော်ရရှိပြီး နိုင်ငံ
အလိုက်တွင် ပထမနေရာရရှိ ရေးအတွက် ကစားသမားများ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးလိုကြောင်း၊ ကစားသမားများ ဒဏ်ရာ မရရှိရေးမှာလည်း အရေးကြီးကြောင်း အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးသောင်းထိုက်က နေပြည်တော် ရွှေ စခန်းတွင်
လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်နေသော ကစားသမားများကို တွေ့ဆုံ
ရေးသားသူ - ဇော်ဇော်
မင်းကိုနိုင်ဟောပြောပွဲတွင် တက်ရောက်သူများ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် စရဖ စုဆောင်း
ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့ တွင်မြို့ခံ လူငယ်များ ဦးစီးကျင်းပသည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ဟောပြောပွဲတွင် တက်ရောက်လာသူများ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့(စရဖ)မှ လိုက်လံစုဆောင်းမှု ပြုလုပ်နေကြောင်း ဟောပြောပွဲတက်လာသော ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲနှင့် ပတ်သတ်သော အချက်အလက်များ စုဆောင်းသည့်အပြင် တက်ရောက်လာသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကောက်ခံမှုကြောင့် ဒေသခံများ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေးခဲ့ရသည့် လွိုင်ကော်မြို့ ဒေသခံ ကိုခွန်းအဘန်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းဟောပြောပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ကရင်နီပြည်လူငယ်များ သမဂ္ဂ (UKSY)နှင့် ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ် (KNGY) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များ ပေး ရန် စရဖ (စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့) က အောက်တိုဘာ၎ရက်နေ့မှာ လာရောက်ပြီး ပြောဆိုသွားခဲ့ ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“လူငယ်နဲ့ပညာရေး ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာပေဟောပြောပွဲကို လူငယ်အသင်းအဖွဲ့တွေ လွိုင်ကော်မြို့ နောင်ယား(ခ)ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ကက်သလစ်အသင်းတော် ဓမ္မာရုံ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှ အာဏာပိုင်တွေက လာရောက်တောင်းခံနေတာပါ ” ဟု ၎င်းကရှင်းပြသည်။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဖြစ်သည့် ဦး မင်းကိုနိုင်၊ ဦးဂျင်မီ နှင့် ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ် တို့က အောက်တိုဘာ၂၉ရက်နေ့တွင် ဟောပြောသွားပြီး အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဆရာချစ်ဦးညို၊ ဆရာမောင်သာချို နှင့် ဆရာမ နုနုရည်(အင်းဝ) တို့ ဟောပြောသွားခဲ့သည်။
“ အာဏာပိုင်တွေက မြို့တော်ခန်းမ မှာ ပွဲလုပ်ဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်ပြီး၊ ကက်သလစ်ဓမ္မာရုံမှာ ပြုလုပ်မှာကိုလည်း သာသနာ့နယ်မြေမှာ စာပေဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူငယ်တွေက အဲဒီ ကက်သလစ်ဓမ္မာရုံမှာ စာပေဟောပြောပွဲ ဖြစ်မြောက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်အတွင်းရေးမှူးကို ခွန်းအသန်းကပြောကြားသည်။
UKSနှင့် KNGY တို့၏ ရုံးမှာလာပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖြည့်ဖို့ ဖောင်ပုံစံစာရွက်တွေ ပါလာ ကြောင်း UKSY နှင့် KNGY က အချက်အလက်တွေဖြည့်ဖို့ ငြင်းဆန်ထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၃ခုနှစ် အဝေးသင်ပညာရေး အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း များလာနိုင်မည်
၂၀၁၃ခုနှစ် အဝေးသင်ဖြေဆိုသော ပထမအသုတ်၊
ဒုတိယအသုတ်၊ တတိယအသုတ် ကျောင်းသား၊
ကျောင်းသူများမှာ စနစ်ဟောင်းအား နောက်ဆုံး သင် ကြားဖြေဆိုရခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း
ယခင်နှစ်ထက် များလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ်
ပထ၀ီဌာနမှ ဆရာမများက ပြောကြားသည်။
ယခင်နှစ်အဝေးသင်ပညာရေးစနစ်တွင် ပထမနှစ်နှင့် တတိယနှစ်များတွင် ဖြေဆိုသော ကျောင်းသား ကျောင်း
သူများ၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း မှာ ကျရှုံးခြင်းများစွာ
ရှိကြောင်း အဝေးသင်ဖြေဆိုသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များက ပြောကြားသည်။
တော့ ဖြေဆိုမှုအပိုင်းမှာ အခက်အခဲတွေရှိ လာနိုင်တယ်။
သေချာစစ်ဆေးပြီး အောင် မှတ်ကျိန်းသေရမှပဲ အောင်သွား
မှာပါ”ဟု ဒဂုံတက္ကသိုလ်ပထ၀ီဝင်ဌာန မှ ဆရာမတစ်ဦးက
ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သည် Assigment စာစဉ်တွင် အတန်းတင်စာမေးပွဲအတွက် အထောက်အကူပြုသော
ဘာသာရပ်များကို ကြို တင်ဖြေဆိုထားရပြီး အနီးကပ်
၁၀ရက်တွင် အတန်းတက်သောလက်မှတ်ဖြင့် စာမေးပွဲ
အတွက် အမှတ်ပေါင်း ပေးခြင်းများရှိကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဆရာမများက ပြောကြားသည်။
အတွက် အဆင်မပြေဘူး။ စာရမှအောင်တော့ မယ်ဆိုရင်
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အတွက် အများကြီး အခက်
အခဲရှိတယ်။ အခုတောင် ကျက်ပြီး ဖြေရတာ အလုပ်နဲ့သူတွေ အဆင်မပြေဘူး”ဟု ဒဂုံတက္ကသိုလ်အဝေးသင် ပထ၀ီဌာနမှ
ပညာရေးနှစ်မှာ သုံးနှစ်ဖြစ်ပြီး စနစ်အသစ်တွင် သင်ကြား
ရေး ၁-နှစ် တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူ များ၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်မည်ဖြစ် သောကြောင့်
ယခု ၂၀၁၃ခုနှစ် အဝေးသင်ပညာရေးစနစ်တွင် ပထမ
အသုတ် သိပ္ပံဘာသာရပ်များဖြေဆိုပြီးချိန်တွင် ဒုတိယ
အသုတ် ၀ိဇ္ဇာဘာသာရပ်များမှ အောက်တိုဘာလအတွင်း၌ အနီးကပ်ကျောင်းတက်ပြီး အတန်းတင် စာမေးပွဲကိုဖြေဆို
ရပြီး တတိယအသုတ်များမှာ နိုဝင်ဘာလအတွင်း သင်ကြား
ကုမ္ပဏီတွေတောင် ပေးနေသေးတာ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း ပေးလိုက်ပါလား
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် တိုင်ရင်းသားနယ်မြေများအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ကို အဟန့်အတားဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု သုံးသပ်နေကြသည်။ ၎င်းင်းအပေါ်အမြင်သဘောထားများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
အရှင်စန္ဒာသီရိ (ဦးဇင်းပုရစ်) ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်သံဃာ
အခုလက်ရှိအစိုးရကရော တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကရော၊ ဒီမို ကရေစီလိုလားတဲ့သူတွေရော၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးကို လိုလားတဲ့သူတွေကနေ တိုင်းပြည် မှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် ဆောင်ရွက် နေကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး မရှိတာက အဓိကက ပြည်တွင်းစစ် ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ် နေတဲ့အခါမှာ တစ်လျှောက်လုံးငြိမ်းချမ်း ရေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ခဲ့ ကြတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ဒီနေ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ သမ်္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်ရောက်လာတယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်ခဲ့ ပြီဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင် တဲ့အခါမှာ ယနေ့အချိန်ထိ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို မရရှိသေးဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုချင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဘ၀နဲ့ ထင်ဟပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ တိုင်းရင်း သာတွေရဲ့ လိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ကို ထင် ဟပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရဘူးဖြစ်နေ တယ်။ အဲဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင် ရွက်တဲ့အခါမှာ သေချာတာကတော့ ဘက်နှစ်ဖက်ပြဿနာကိုပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေမဟုတ်လို့ဆိုတာ ကို ဦးဇင်းကတော့မြင်တယ်။ တိုင်းပြည် မှာ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရဖို့ အစိုးရ အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ အခါမှာ ဆွေးနွေးခြင်းရဲ့သဘောကိုနား လည်ဖို့လိုတယ်။ သဘောပေါက်ဖို့လို တယ်။ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ အပြန်အလှန် သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကို အပေးအယူလုပ် ရတယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးခြင်းရဲ့သဘာဝ ပဲ။ အဲဒီလိုအပေးအယူလုပ်တဲ့အခါမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဘက်ကလည်း ပေးသင့် ပေးထိုက်တာတွေ လျှော့သင့်လျှော့ထိုက် တာတွေကို လျှော့ပေးရမယ်။ ဒီလိုနှစ် ဖက်စလုံးက အပေးအယူမျှမှ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရမယ်။ နောက်တစ်ခုက သမ်္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်ပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ မှာ ဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ် ဘူးလို့ ဦးဇင်းအနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။ ဘာ ဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အခုအချိန်ထိ သမ္မတက အရပ်ဝတ်ဝတ်နေပေမဲ့ စစ် မာန်အခုချိန်ထိ မကျသေးဘူးလို့မြင် တယ်။ တကယ်လို့ စစ်မာန်တွေကျမယ် ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အောင်မြင်နိုင် မယ့် အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ အခုဟာ စစ်မာန်မကျတဲ့အပေါ် ဒီတိုင်းပြည်မှာ သူကိုစွန့်ပယ်လို့မရသေးတဲ့အာဏာစွဲ စရိုက်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ငြိမ်း ချမ်းရေးက ကြန့်ကြာနေတာဖြစ်တယ်။ အဓိကတိုင်းပြည်မှာ လိုအပ်နေတာက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေပေးရမယ်။ လူမျိုးစုတိုင်း ရင်းသားတွေအပေါ်မှာ ပေးသင့်ပေး ထိုက်တဲ့လူမျိုးစုအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို အပြည့်အ၀ပေး ရမယ်။ အဲလိုပေးမှသာလျှင် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်။ အဓိကကတော့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရော၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တွေရော၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကြဖြေရှင်းကြ မှသာ ဦးဇင်းတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ မျှော်လင့်လို့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း သွားနေမယ်ဆိုရင် အခုလိုငြိမ်းချမ်းရေး ကို ဆွေးနွေးလိုက်ပျက်ပျက်သွားလိုက်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ ဦးဇင်းတို့က အခုချိန်ထိ အမြောက်သံတွေကြားထဲမှာ ပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေလုပ်နေကြရတယ်။ အဲဒီတော့အမြောက်သံတွေရပ်စဲပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးအမြောက်သံတွေအစား ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းလောင်းသံတွေ ဦးဇင်း တို့ကြားချင်တာ။ အခုကြားနေရတာက အမြောက်သံ၊ ဗုံးသံတွေဖြစ်နေတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလက်ရှိအတိုင်း သွားနေမယ်ဆိုရင် ဦးဇင်းတို့မျှော်မှန်းတဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အခုအခြေအနေ တိုင်းဆိုရင် မလွယ်ဘူး၊ မရရှိနိုင်ဘူး၊ ကြန့် ကြာနေဦးမှာဖြစ်တယ်။ အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့ စစ် မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့သူတွေရော၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတဲ့သူတွေရော မိမိတို့လိုလားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ် တွေထိုးကြတယ်။ သဘောတူညီမှုစာချုပ် တွေချုပ်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ စာချုပ်တွေ ချုပ်၊ လက်မှတ်တွေထိုးနေကြပေမဲ့ တိုင်း ပြည်မှာ နိုင်ငံရေးထဲမှာ စစ်တပ်ကပါနေ သ၍ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်ရေးရဖို့မလွယ်ဘူး။ အခုတိုင်းပြည်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှာရော၊ နိုင်ငံရေးမှာရော၊ စစ်တပ်ကပါဝင်ပတ် သက်နေတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး က ဝေးကွာနေဦးမှာပဲ။ အဓိကကတော့ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊သမ်္မတ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀န်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လို လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို ရှေးရှုပြီးတော့ ပေးသင့်ပေးထိုက်တာတွေ ရသင့်ရထိုက်တာတွေရစေမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးက ဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်။ ဘက်တစ်ဖက်ထဲမှာ စာချုပ်ချုပ်တယ်။ တစ်ဖက်မှာ စစ်တပ်က နယ်မြေရှင်းလင်း ဆိုပြီးလုပ်တယ်။ အဲဒါကိုက အထက် အောက်အပြန်အလှန်ညီညွတ်မှုအားနည်း တဲ့သဘော၊ အပြန်အလှန်စီးဆင်းမှု၊လေး စားမှုအားနည်းမှုကို ပြတာပဲ။ အထက် အောက်အာဏာပါဝါတွေပြနေတဲ့သဘော ဆောင်နေတယ်။ အဲဒါဟာ တိုင်းပြည် အတွက် မကောင်းဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။
ဦးသုဝေ (ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာပြည်)
ငြိမ်းချမ်းရးလုပ်တယ်ဆိုတာကောင်း ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဆူပူ ရေးလုပ်တာတော့ မကောင်းဘူး။ ငြိမ်း ချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်မြင် သလောက်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆွေးနွေး နေကြတဲ့၊ လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေက ငြိမ်း ချမ်းရေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရပါတယ်။ အဲ ဒီလိုသူတို့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်သလို တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ကြပါတယ်။ အဲဒါကို သဘောပေါက်ပြီ။ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအောင် အောင်မြင်မြင်ဖြစ်စေချင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်း ရေးဆိုတာအားလုံးကြိုက်ကြတာပဲလေ။ အခုငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ခက်နေတာကဘာ လဲလို့ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ချင်ကြတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်မလုပ် ပါနဲ့။ အားလုံးစိတ်ကြိုက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ် ချင်ကြတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်မလုပ်ပါနဲ့။ အားလုံးစိတ်ကြိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်း ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ အထူးသဖြင့် ကတော့ ဒီမိုကရေစီရှိနေရမယ်။ ဒီမိုက ရေစီရှိနေရင် အမြဲတမ်းဆွေးနွေးနိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးရှိနေမယ်။ အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင် သူ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်တိုင်းပြည် တစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကို မျှော်တွေးပြီး လုပ်ကြရင်အဖြေမှန်ရပါလိမ့်မယ်။ ငြိမ်း ချမ်းရေးဆိုတာ အားလုံးရဲ့သဘောတူညီ ချက်ယူရမယ်။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အယူအဆ သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးတာကောင်း ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက် ရမှာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ် စဉ်တွေက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေ ကို ကြည့်ချင်ပါတယ်။ မြင်ချင်တယ်။ ကျေးလက်နေပြည်သူတွေ အမြန်ဆုံး ခံစားစေချင်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကိုမဟာ မိတ်တွေရော၊အစိုးရဘက်ကရော၊စဉ်းစား ကြဖို့ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ အခုလောလော ဆယ်မှာ တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အရင်ဆုံးလုပ် စေချင်တယ်။ ဒီဟာကို အမြန်ဆုံးဖြစ် အောင် အစိုးရကို တိုက်တွန်းချင်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကအဓိကတောင်း ဆိုနေတာက သူတို့နယ်မြေထဲကိုဝင်လာ တဲ့အစိုးရတပ်တွေ ၀င်လာတဲ့ဟာကို ထွက်သွားပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ ဒါကို အစိုးရက စဉ်းစားသင့်တယ်လို့မြင်တယ်။ အခြားနိုင်ငံရေးအရ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာ တွေကို ဆွေးနွေးရမယ်။ ဒီအသေးမွှား ကိစ္စတွေကို အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေကို ထိုးဖောက်နေတာကို ပြန် စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဒါကို အမြန်ဆုံးဆုတ်ခွာပေးဖို့ တောင်း ဆိုချင်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း တွေအနေနဲ့ မလိုက်ရောစရာအကြောင်း မရှိဘူး။ တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ခရိုနီ တွေကို ဒီအတိုင်းပေးနေတာ။ သူတို့ကို သစ်တောတစ်တောလုံးပေးလိုက်တာတို့ ရှိတာဘဲ။ ဘာလို့ တိုင်းရင်းသားတွေကို မပေးနိုင်ရမှာလဲ။ ပေးလိုက်ပါ။ ပေးလိုက် ရင်ဒီငွေတွေက သူတို့ဒေသတွေကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို အများကြီးလုပ်လာနိုင် မှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်း သားတွေက သူတို့ရဲ့ သယံဇာတတွေကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရရင် ဘယ်တိုက်တော့မလဲ။ ဒါကြောင့် ပေးသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်တယ်။ ဒီလိုခွဲဝေတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော် ကတစ်ဝက်ယူ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကတစ် ၀က်ယူ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ရာခိုင်နှုန်းတွေ အတွက် ဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ခဲယဉ်းတဲ့ကိစ်္စမှ မဟုတ်တာ။ ဒီလိုခဲယဉ်း တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာလည်း ဘာ မဟုတ်တဲ့ကုမ်္ပဏီတွေတောင် ပေးနေရ လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဌေးကြွယ် (၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် ပွင့်လင်းအဖွဲ့အစည်း)
အခုလိုင်ဇာဆွေးနွေးပွဲမှာ တစ်နိုင်ငံ လုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို သဘော တူညီချက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ “၀”နဲ့ မိုင်းလားအဖွဲ့မပါသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ မူအရ အားလုံးသဘောတူသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတစ်နိုင်ငံလုံးအပစ် အခတ်ရပ်စဲရေးနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေး အရဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိမယ်ဆို တာကို တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးက ယုံ ကြည်တဲ့အတွက် ဒီသဘောတူညီချက်ကို ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက် ထက်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေလုပ် ခဲ့တယ်။ ဒီလိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှာ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြ ပေမဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအထိ မရောက် တဲ့အခါမှာ ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြန်ပြီး တော့ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။ အားလုံး ပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားအရေး အာမခံ ချက်ပေးနိုင်တဲ့ တန်းတူညီမျှမှု၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကို ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေး နိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးအရေ ဆွေးနွေးမှုတွေသွား ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကလည်း တကယ်ကို တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုရည်ရွယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံး ဟာ နိုင်ငံအတွက်စုစည်းညီညွတ်မှုတွေ ရရှိနိုင်အောင်သွားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီကိစ်္စ ရပ်တွေဟာ စားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးရမဲ့ကိစ်္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ မှာ တပ်တွေရှိပါတယ်။ ဒီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ ဒီ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ အခုလက်ရှိတပ်မတော်နဲ့ ဘယ်လိုပူးပေါင်းနိုင်မလဲ။ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်အဆင့်ထိ သွားနိုင်မလား။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပြဋ္ဌာန်း ထားမှုတွေမှာ ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်မှုတွေမှာ လယ်လောက်အတိုင်း အတာအထိ အာဏာခွဲဝေမှုပေးနိုင်မလဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းမှု တွေကိုရော ဘယ်လောက်ထိ အချိုးချ နိုင်မလဲ။တကယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်ကို ဆက်လက်ပြီးသွားမလဲဆိုတာ အများကြီးဆွေးနွေးရဦးမှာပါ။ ငြိမ်းချမ်း ရေးအတွက်တကယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အဓိကကတော့ ရိုးသားမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုကို အခြေခံပြီးသွားရပါလိမ့်မယ်။ အနာဂတ် မျှော်မြင်ထားတဲ့အမျှော်အမြင်ကြီးမှုတွေ နဲ့ပေါင်းစည်းရပါလိမ့်မယ်။ အနာဂတ် မျှော်မြင်ထားတဲ့အမျှော်အမြင်ကြီးမှုတွေ နဲ့ ပေါင်းစည်းရပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ဆက်လက်ပြီး တော့ ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒီကနေ့ ရရှိနေတဲ့အခြေအနေဟာ ဘယ်တုန်းက မရရှိခဲ့ဘူးတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ ဒီအခြေအနေကောင်းကို ဆက်လက်ပြီး တော့ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါစေလို့ပြော ချင်တယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း တတ်နိုင် တဲ့အပိုင်းကနေ ၀င်ရောက်ပြီးတော့ လုပ် ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
INGO နှင့် NGO များ ခွဲခြားဆက်ဆံသည်ဟုဆိုကာ ရခိုင်ဒေသခံများ ကန့်ကွက်
ပဋိပက္ခများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် INGO နှင့် NGO များသည် ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုအကြား ခွဲခြားဆက်ဆံသည်ဟုဆိုကာ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံဝင်း အတွင်းတွင် မြို့ခံလူထု ၃၀၀ ကျော်က ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြကြောင်း စစ်တွေ ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ပေါက်တောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုတွင် ဒဏ်ရာရရှိသည့် ဘင်္ဂါလီများကို INGO တစ်ခုက အမြန်ရေယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်ကာ စစ်တွေဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့သော်လည်း လက်မောင်းတွင် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည့် ရခိုင်အမျိုးသမီးကို ခေါ်ဆောင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ဒေသခံများ မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြကြောင်း အဆိုပါ ဆန္ဒပြသူများထံမှ သိရှိရသည်။
ပေါက်တောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးကာ တစ်ဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့မှု၊ INGO နှင့် NGO များက ပေးသည့် ဆေးများကို သောက်သုံး၍ စစ်တွေမြို့ ကျေးတော၊ ဗျိုင်းဖြူရွာ အပါအဝင် ကျေးရွာအချို့တွင် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှု၊ INGO နှင့် NGO များက စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ အိမ်များ၊ ဂိုဒေါင်များကို ငှားရမ်းကာ ဘင်္ဂါလီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အဖျက်လုပ်ငန်းများ လုပ်နေမှုတို့ကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးရန် ပြည်သူလူထုကိုယ်စား စစ်တွေမြို့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ရဟန်းတော်များက ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြထားကြောင်း ဦးဓမ္မဓဇက မိန့်ကြားသည်။
စစ်တွေမြို့တွင် မြို့ခံလူထု ၃၀၀ ဝန်းကျင်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်တွင် တောင်းဆိုချက်များ ပါဝင်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်ကာ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ တောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်း စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ရဟန်းတော်များ စစ်တွေမြို့ မြောက်ပိုင်း တာဝန်ခံလည်း ဖြစ်သည့် ဦးဓမ္မဓဇက ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
INGO နှင့် NGO များကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက် မပေးလိုကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ သတင်းပြန်ကြားရေးဌာန (UNIC) မှ ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဦးအေးဝင်း က ပြောကြားသည်။
အလားတူ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပေါက်တော မြို့နယ်တွင်လည်း INGO နှင့် NGO များ ဝင်ထွက် သွားလာခြင်းများကို ကန့်ကွက်သည့်အပြင် ဒေသခံ မဟုတ်သည့် INGO နှင့် NGO များကို နှစ်ရက်အတွင်း ထွက်ခွာပေးရန်၊ INGO နှင့် NGO များ၏ အလှူငွေများကို လက်မခံရန် စသည့် အချက် ကိုးချက်ပါ ကြေညာချက် တစ်စောင်ကို နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် မြို့လူထုက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် INGO နှင့် NGO အဖွဲ့ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ရှိသည့်အနက် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၁၉ ဖွဲ့ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ဒေသခံလူထုကမှု INGO နှင့် NGO အဖွဲ့ပေါင်း ၈၀ ခန့် ရှိသည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။
မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့တို့ ဘေကျင်းမြို့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကွန်ဂရက် အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ တိဗက် ခန်းမတွင် အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်က တွေ့ဆုံစဉ် CAIFC ဥက္ကဋ္ဌ (ယခင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဟောင်း)Li Zhaoxing (လီဇောက်ရှင်း)က ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်ပနိုင်ငံခရီးစဉ် ၁၀ ခု ထွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းနိုင်ငံများထဲတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တစ်ကြိမ်၊ သြစတြေးလျ နိုင်ငံသို့ တစ်ကြိမ် နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများသို့ နှစ်ကြိမ် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ခေါ်လိုသော တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီး စွာဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ကြီးအနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၁၅ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေ ခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို အချိန်မီပြင်ဆင် နိုင်ပါ့မလားဆိုသည့် အချက်ကိုလဲ စိုးရိမ်လျက်ရှိသည့်အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ကြောင်းလည်း ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၏ ပြန်လည်ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံတကာချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ကြီးနှင့် မြန်မာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့သည် အောက်တိုဘာလ၂၇ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ၂ ရက်ထိ တစ်ပတ်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်းခေါင်းဆောင်ကာ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်တို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တရုတ် ပြည်အာရှရေးရာအထူးအရာရှိ (ယခင် တရုတ်ပြည်ဒုတိယ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဟောင်း)မစ္စတာဝမ်ရင်ဖန်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်တက္ကသိုလ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပါမောက္ခများ မြန်မာနိုင်ငံ စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်နေသော ShineshineKaidiကုမ္ပဏီတို့နှင့် တွေ့ဆုံကာ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံရေးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနှင့် အပစ်ရပ်ရေး မြစ်ကြီးနားတွင် သုံးရက်ကြာဆွေးနွေး
မြစ်ကြီးနား၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ရက်။
နိုဝင်ဘာလ ၄ရက်နေ့မှစတင်၍ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ မဂျွယ်ခန်းမတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ၁၃ဖွဲ့ နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ် ငန်းကော်မတီတို့ သုံးရက်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ် လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ၁၃ဖွဲ့ဖြစ်သည့် KIO မှ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် အပါအဝင် KPC မှ ဗိုလ်မှူး စော မောင်မောင်၊ WNO ဦးတာ့မဟာ၊ ပအို့ဝ်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(PNLO)မှ ဦးခွန်မြင့်ထွန်း၊ ပလောင်(တအောင်း) ပြည်နယ်လွတ် မြောက် ရေးတပ်ဦး (PSLF)မှ ဦးတာ့အိုက်ဖုန်း၊ ALP မှ ဦးစိုင်သုခ၊ NMSP မှ ဦးနိုင်အောင်မင်း၊ RCSS မှ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးလှ၊ KNU မှ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး၊ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားဖက်ဒ ရယ်ကောင်စီ (UNFC)မှ ဦးနိုင်ဟံသာနှင့် ဦးခွန်အေဘယ်တွိဒ်၊ SSPP မှ ဦးစဝ်ခွန် ဆိုင်း၊ DKBA မှ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် စော မူရှေး၊ ANC မှ ဦးထွန်းဇော်နှင့် LDU မှ ဦးကြာခွန်ဆာတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာမူကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ ၁၇ဖွဲ့သည် အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက် နေ့မှ စတင်၍ လိုင်ဇာမြို့ရှိ ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်တွင် နိုဝင်
ဘာလ ၂ရက်နေ့အထိ လေးရက်ကြာ ဘုံသဘောတူညီချက် ၁၂ချက်အား သဘော တူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး RCSS မှ အဆိုပါ ဘုံသဘောတူညီချက်အား ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
ပြန်လည်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှု မပြုလုပ်ရသေးသည့်အတွက် လောလောဆယ်အချိန်တွင် ပါ ဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အမှတ် ၂ လမ်းမကြီး ငမိုးရိပ်တံတားအနီး တနင်္ဂနွေည ၁၁ နာရီကျော်ခန့်က ယာဉ်တိုက်မှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
တံတားပေါ်ကမောင်းလာတဲ့ စူပါကာစတန်ယာဉ် နဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းဘက်က မောင်းလာတဲ့ အစ်ဆူဇူးယာဉ်တို့ တိုက်မိကြတယ်လို့ အဲဒီအနား နေထိုင်သူများက ပြောပြပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရသွားတာ၊ သေဆုံးတာ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
စူပါ ကာစတန် တုံးလုံး လဲသွားပြီး အစ်ဆူဇူးက ရှေ့ဘီးကျွတ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(သတင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံများ - စိုင်းဇော်/ဧရာဝတီ)
သစ်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချလျှင် သစ်ဆွဲဆင်များ ဒုက္ခရောက်...
ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများတွင်...
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် AIDS လူနာ ခုနစ်သောင်းခွဲကျော် ART ...
ယုဇနပလာဇာအနီး အုပ်စုလိုက် ရိုက်နှက်သူများကို ဖမ်းဆ...
လက်ပံတောင်းတောင်အနီး အင်ကြင်းတောင်ပေါ်တွင် သပိတ်စခန...
ကမ္ဘာ့ဖလား ဖွင့်ပွဲတွင် မြန်မာရိုးရာခြင်းလုံး သရုပ်...
အရပ်သားတစ်ဦးကို အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်နှစ်ဦး သေနတ်ဒင်...
ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် အကျဉ်းချခံရသူများ ပြန်လွှတ်ပေးရန် နိ...
အငှားယာဉ်ပေါ် ၌ဓါးရှည် (၁)ချောင်းတွေ့ရှိ၍ ယာဉ်မောင်...
Miss Universe 2013 National Costume Show မှနိုင်ငံ...
Miss Universe 2013 ပြိုင်ပွဲ National Costume Show...
ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ရာ မလိုက်သောကြောင့် အမျိုးသမီးကိုရ...
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားသမားများကို ဒုဝန်ကြီးသ...
မင်းကိုနိုင်ဟောပြောပွဲတွင် တက်ရောက်သူများ ကိုယ်ရေး...
၂၀၁၃ခုနှစ် အဝေးသင်ပညာရေး အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း မျ...
ကုမ္ပဏီတွေတောင် ပေးနေသေးတာ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း ...
INGO နှင့် NGO များ ခွဲခြားဆက်ဆံသည်ဟုဆိုကာ ရခိုင်ေ...
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနှင့် အပစ်ရပ်ရေး မြစ်ကြီးနား...
နောက်ပိုင်းမှာ Wireless router တွေအစား မီးလုံးလေးေ...
လွှတ်တော်တွင်း တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဖြည်း...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ဒီဂျစ်တယ်မီတာများ အခမဲ့တပ...
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်က...
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းအရ နန်းသီတာ ဆ...
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် သာဓုကန် စက်မှုဇုန်ရှိ MAI အလူမီနီ...
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှ...
အစိုးရနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ဆွေးနွေးရန် အခက်အခဲ မရှ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် အတည်ပြုပြီး...
နိုင်ငံခြားသားဆိုလျှင် အမြတ်တင်တတ်သည့် အမူအကျင့်မျ...
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စတော့အိတ်ချိန်းဈေး...
ဖြတ်လမ်းအမွေ မပေးသင့်ပါ (Daily, Vol-1 No-179)
ဖြူဖြူကျော်သိန်း၏ ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘဝ
လူငယ်ဇာတ်မင်းသား ဟန်ဇာမိုးဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရထားသံလမ်းပေါ်တွင် အိပ်ပျော်နေသော ကလေး(၃)ဦးအား ရထား...
ရန်ပုံငွေပွဲမှသတင်းများကို အန်နာဟက်သာဝေး၏ ကိုယ်စား...
ဆင်တက်မော် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ဆူပူမှု ဖြစ်ပွားသောကြေ...
လှေနစ်မြုပ်တဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာ ၆၀ နီးပါးသေဆုံး ပျော...
အဆိုတော်အဖြစ် အနုပညာလောကထဲ တေးအယ်လ်ဘမ်သစ်နဲ့ စမိုင...